Wacaal Daray ah: Odinga oo loo dhaariyay madaxwaynaha Kenya – Radio Daljir
Wacaal Daray ah: Odinga oo loo dhaariyay madaxwaynaha Kenya
Janaayo 30, 2018 1:47 g 0
Masuuliyiinta dowladda Kenya ayaa maanta hawada ka saaray warbaahinta dalkaasi ee muuq baahiyaasha ah kadib markii ay sheegtay inay ka hortagayso in si toos ah loo baahiyo xafladda dhaarta hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Raila Odinga oo qaadacay doorashadii muranka dhalisay ee sanadkii hore ka dhacay dalka Kenya.
Odinga ayaa ku dhawaaqay inuu yahay madaxwaynaha shacabka, isagoo kumanaan taageerayaashiisa ah kula hadlayay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya.
Arrintan ayaa ka dhalatay kadib markii uu waxba kama jiraan ku tilmaamay doorashadii guud ee dalkaasi natiijadii kasoo baxday ee bishii Oktoober dib loogu doortay madaxwayne Uhuru Kenyata, taasi oo uu ka qaybgalin Odinga.
Madaxwayne Kenyata ayaa xilka loo dhaariyay markiisii labaad bishii Nofember ee lasoo dhaafay.
Waxaa uu uga digay warbaahinta inay baahiyaan xafladda Talaadada ee maanta, isagoona ku sheegay qabashada doorashada noocan oo kalle iyo baahintiisu ay tahay qiyaamo.
Muuq baahiyeyaasha dalka Kenya ayaa si internet ah ku gudbinayay xafladda iyagoo adeegsanayay websiteyada, youtube iyo Facebook.
Isagoo haysta kitaabka Bibleka gacantiisa bidix kuna sugan beerta Park ee Nairobi ayuu sheegay inuu ka jawaabayo xilka inuu la wareeho oo shacabka dalka Kenya uu madaxwayne u noqdo.
Kuxigeenka Odinga Mr Kalonzo Musyoka ayaana ka qaybgalin xafladda, hase ahaatee Odinga ayaa sheegay in dib laga dhaarin doono.
Odinga ayaa ku tilmaamay go’aanka warbaahinta looga mamnuucay inay baahiyaan xafladda inuu yahay mid muujinaysa heerka kalsooni xummo, lana mid tahay go’aankii Uganda looga mamnuucay tabinta doorashadii 2016kii warbaahinta.
Madaxwaynaha Soomaaliya oo dib dalka ugu soo laabtay
Ciidamo katirsan Puntland oo khasaare kasoo gaaray qarax kadhacay agagaarka Galgala